Sunday November 28, 2021 - 11:45:42
Melleteriga Suudaan ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay weerar culus oo maleeshiyaad Amxaara ah ay ka fuliyeen xuduudda ay wadaagan Itoobiya iyo Suudaan.
Afhayeen u halday Jeyshka Suudaan ayaa sheegay in shalay gelinkii dambe ay dagaallo culus ka dhaceen mandiqadda Alfashaqa ee xuduudda kulaasha kadib markii ay ciidamada itoobiya oo kaabaya maleeshiyaad Amxaara ah ay gudaha ugaleen halka loo yaqaan Barkad Nuureyn.
Dolwadda Suudaan waxay xaqiijisay dhimashada 6 kamid ah ciidamadeeda oo mid kamida uu ahaa sarkaal lagu dilay dagaalladii shalay dhacay "Ciidanka melleteriga ayaa si adag uga hortagay weerar ay maleeshiyaad Amxaaro ah kusoo qaadeen mandiqadda Alfashaqah ujeedkoodu wuxuu ahaa in ay carqaladeeyaan goosashaqada beeraha" ayuu yiri afhayeenka ciidamada.
Wararka ayaa intaas ku daraya in weerar kale uu ka dhacay mandiqadda Malkamu oo isla Fashaqa katirsan, Itoobiya ayaa dagaalkii shalay ku sifaysay mid ka dhashay maleeshiyaad 'Argagaxiso ah' oo xuduudda kasoo xaluushay.
Sanaddii lasoo dhaafay ayay ciidanka Suudaan maleeshiyaad Xabashid ah ka qabsadeen deegaannada Al Fashaqah oo hodon ku ah beeraha, xukuumadda Addis Ababa ayaa tallaabadaas ku sifaysay mid daan daansi ah oo ka dhan ah dadka kasoo jeeda qowmiyadda Amxaarada.